လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ “ဘဝ တိုးတက်စေ မည့် နည်း လ မ်း (၁၁) ချက်” – Zartiman
၁။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆို ဘာလုပ်မလဲ အရင်စဉ်းစားပါ၊ စဉ်းစားပြီးမှ လေ့လာပါ၊ လေ့လာပြီးမှလုပ်ဆောင်ပါ၊ လုပ်ဆောင်ပြီးရင် လည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။၂။ ကိုယ်နေချင်တဲ့ အဆင့်ကို ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ပါ။၃။ ကိုယ်မြင်သလောက်ပဲ ကိုယ်ရပါလိမ့်မယ်။၄။ မသိ ရင် မေးပါ။ မေးရင် အဖြေရပါတယ်။ တတ်ယောင်ကမ်း မလုပ်ပါနဲ့။
၅။ သင်ယူခြင်းဆိုတာ ဘဝတိုက်ပွဲအတွက် လက်နက်ကောင်း တစ်ခုပါ။ များများသင်ယူလေလေ ကိုယ့်ဆီမှာ တိုက်ပွဲအတွက် လက်နက် များလေလေ။ လက်နက်များလေလေ အနိုင်ရဖို့ သေချာလေလေပါပဲ။၆။ အချိန်တွေကို အရင်းအနှီးလုပ်ပြီး ပညာတစ်ခုခု ရအောင်ယူပါ။ အလကား အချိန်တွေကို ဖြုန်းတီး မပစ်ပါနဲ့။၇။ ငွေကို အရင်းအနှီး အတွက်ပဲ သုံးပါ။ အလကား ဖြုန်းမပစ်ပါနဲ့။
၈။ ချမ်းသာခြင်းဟာ ဘဝအဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ချမ်းသာခြင်းတွေ့မှ ဘဝစတာပါ။၉။ ချမ်းသာခြင်း မျိုးစေ့ ဆိုတာ အရင်ဆုံး စိုက်ပျိုးရ တယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတယ် ပြီးမှ ရိတ်သိမ်းလို့ရမယ်။၁၀။ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒဟာ ဘဝရဲ့ သံလိုက် အိမ်မြောင်ပါပဲ။၁၁။ မိမိ ရည်မှန်းချက် ကို ပုံဖော်သူသာ ဖြစ်ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ပုံဖော်ခြင်းခံရသူ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
Credit. To. Ko Latt – page
၁။ အလုပျတဈခုလုပျမယျဆို ဘာလုပျမလဲ အရငျစဉျးစားပါ၊ စဉျးစားပွီးမှ လလေ့ာပါ၊ လလေ့ာပွီးမှလုပျဆောငျပါ၊ လုပျဆောငျပွီးရငျ လညျး ပွနျလညျသုံးသပျပါ။၂။ ကိုယျနခေငျြတဲ့ အဆငျ့ကို ကိုယျတိုငျ သတျမှတျပါ။၃။ ကိုယျမွငျသလောကျပဲ ကိုယျရပါလိမျ့မယျ။၄။ မသိ ရငျ မေးပါ။ မေးရငျ အဖွရေပါတယျ။ တတျယောငျကမျး မလုပျပါနဲ့။
၅။ သငျယူခွငျးဆိုတာ ဘဝတိုကျပှဲအတှကျ လကျနကျကောငျး တဈခုပါ။ မြားမြားသငျယူလလေေ ကိုယျ့ဆီမှာ တိုကျပှဲအတှကျ လကျနကျ မြားလလေေ။ လကျနကျမြားလလေေ အနိုငျရဖို့ သခြောလလေပေါပဲ။၆။ အခြိနျတှကေို အရငျးအနှီးလုပျပွီး ပညာတဈခုခု ရအောငျယူပါ။ အလကား အခြိနျတှကေို ဖွုနျးတီး မပဈပါနဲ့။၇။ ငှကေို အရငျးအနှီး အတှကျပဲ သုံးပါ။ အလကား ဖွုနျးမပဈပါနဲ့။
၈။ ခမျြးသာခွငျးဟာ ဘဝအဆုံး မဟုတျပါဘူး။ ခမျြးသာခွငျးတှမှေ့ ဘဝစတာပါ။၉။ ခမျြးသာခွငျး မြိုးစေ့ ဆိုတာ အရငျဆုံး စိုကျပြိုးရ တယျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရတယျ ပွီးမှ ရိတျသိမျးလို့ရမယျ။၁၀။ ပွငျးပွတဲ့ ဆန်ဒဟာ ဘဝရဲ့ သံလိုကျ အိမျမွောငျပါပဲ။၁၁။ မိမိ ရညျမှနျးခကျြ ကို ပုံဖျောသူသာ ဖွဈပါစေ။ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ ပုံဖျောခွငျးခံရသူ မဖွဈပါစနေဲ့။